पंफा भुसालको प्रश्न : मोदी नेपाल आउँदा भारतीय कमाण्डो किन ? - Everest Dainik - News from Nepal
पंफा भुसालको प्रश्न : मोदी नेपाल आउँदा भारतीय कमाण्डो किन ?
काठमाडौं, जेठ १ । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रकै सांसदले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा ठूलो संख्यामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा माओवादी सांसद पम्फा भुसालले कुनै पनि विदेशी पाहुनालाई सुरक्षा दिन नेपाल सक्षम रहेको बताइन् ।
याे पनि पढ्नुस एकता संयोजन समितिको बैठक शुक्रबार
तर, मोदीको भ्रमणका क्रममा ठूलो संख्यामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘अहिले ठूलो संख्यामा भारतीय सुरक्षा कमाण्डो ल्याउने र पहिलो घेरामा उनीहरु हुनुले हाम्रो देशको सुरक्षामा प्रश्न खडा गर्न खोजेको हो कि ? नेपाली सेनाको क्षमता र भूमिका न्यूनीकरण गरेको हो कि ?’
पहिलो घेरामा भारतीय सुरक्षाकर्मी रहँदा मन्त्रीहरु नै जान नसक्ने अवस्था आएको उनले बताइन् । कुनै पनि देशको पाहुना बोलाउँदा सुरक्षा दिन नेपाल सक्षम रहेको भन्दै उनले भनिन्, पाहुनालाई सुरक्षा दिन सक्दैन भने किन बोलाउने ?
माओवादी प्रवक्तासमेत रहेकी भुसालले सीमा समस्या, विराटनगर फिल्ड अफिस हटाउने जस्ता मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
याे पनि पढ्नुस फोरम नेपाल तत्काल सरकारमा जानेबारे छलफलमा जुट्दै
उनले भ्रमणको तिथिमिति घोषणालगायतमा परराष्ट्र मन्त्रालय पछि परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् ।